Accueil > Newsletters > Filazam-baovao faha-79
« Newsletter n° 79
Filazam-baovao faha-80 »
publié par Admin, le lundi 16 octobre 2017
TSY AZO EKENA NY FANENJEHENA IREO MPIARO NY ZON’NY FOKONOLONA VOAKASIKY NY FITRANDRAHANA VOLAMENA TSY ARA-DALANA ATAON’NY MPITRANDRAKA SINOA IZAY MIVERINA INDRAY AO AMIN’NY DISTRIKAN’I MANANJARY
Tamina fanambarany maro hatramin’ny volana ôktôbra 2016, ny CRAAD-OI (Centre de Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement) dia niampanga ireo fanitsakitsahana ny lalàna sy ny zon’Olombelona fototra mahakasika ireo mponina amoron’ny vinan’asa fitrandrahana volamenan’ny mpandraharaha sinoa izay tsy ara-dalàna nefa natao tsy maty manota ao amin’ny kaominin’i Vohilava sy Ambaladara, distrikan’i Mananjary, Faritra Vatovavy Fitovinany.
Taorian’izany, ny Ben’ny Faritra sy ny ireo mpiandraikitry ny Birao Nasionaly misahana ny Tontolo Iainana (ONE) dia nandidy ny fampijanonana io fitrandrahana io izay sady tsy ara-dalàna no manohy mitera-doza noho ny fampiasan’ny mpanjary sinoa volavelona (mercure). Rehefa nijanona volana vitsivitsy, na teo aza ireo fandraràna, dia naverina ny fitrandrahana tao amin’ny kaominin’i Vohilava, araka ny vaovao nampitain’ny mponina tamin’ny Sampana any amin’ny faritry ny Observatoire Indépendant des Droits Economiques Sociaux et Culturels à Madagascar (OIDESCM) arindran’ny CRAAD-OI.
Ankoatr’izany, ireo mponina ao Ambaladara dia mandà mafy ny fametrahan’ireo mpitrandraka sinoa ireo indray ny fitaovany hanohizany ny asa fitrandrahany ao amin’io toerana ao amin’ny kaominin’i Marokarima io.
Nampahafantarina ny mponina ao an-toerana io fiverenan’ny asa fitrandrahana volamena io nandritry ny fivoriana niantsoana vahoaka ny faha 27 septambra 2017 tao Vohilava. Solontena notarihin’ny manam-pahefana ao an-toerana no tonga nampahafantatra ny mponina fa nahazo alàlana hiverina hanohy ny asa fitrandrahany volamena ny orinasa sinoa, saingy tsy naseho ny besinimaro ny taratasy misy izany alàlana voalaza izany.
Nampiasa ny zony hanamarina izany filazàna am-bava izany Atoa RALEVA, mpikambana ao amin’ny « Justice et Paix » sy ny sampana any amin’ny faritry ny OIDESCM, ka nangataka ireto solontena hampiseho ny taratasim-panjakana mikasika izany fahazoan-dàlana izany. Io fandraisam-pitenenana io no niteraka ny fanidina azy tanaty tranon’olona ny alin’ny faha-27 septembra 2017, ny ampitso dia nafindra tany Mananjary ary notanana am-ponja mandritry ny 5 andro. Ary izao faha-3-n’ny volana Oktobra izao izy dia naiditra am-ponja mandra-piandry ny fitsaràna azy.
Fanampin’izany, maro ireo olona nahazo fandrahonana ho voagatra noho izy voalaza fa manelingelina ny asa fitrandrahana volamena ataon’ireo mpandraharaha sinoa ao amin’ny renirano Isaka izay mandalo ao an-tanànan’i Vohilava.
Manoloana ireo fanararaotam-pahefàna sy fanenjehana ny mpiaro ny zon’ny olona monina eny amin’ny manodidina izao, ny CRAAD-OI sy ireo mpiara-misalahy aminy dia manameloka arak’izay tratry ny heriny izao zavatra ataon’ny manam-pahefana any an-toerana voakasik’ity raharaha ity izao, noho izy ireo mampiasa ny fomba rehetra ahatonga ny mpandraharaha sinoa hiverina hanao ny asa fitrandrahana volamena tsy ara-dalàna sy tsy maty manota, na inona na inona takian’izany.
Mampahatsiahy ny manam-pahefana izahay fa ny mponina amin’ireo kaomina voakasika ireo dia mientana mafy sy tena tapa-kevitra hampihatra ny rariny sy ny hitsiny ka andraikitry ny manam-pahefana ny mamaly ny fangatahana nataon’izy ireo efa am-bolana maro ny hampitsaharana ny fisian’ny tsy maty manota tsy azo ekena nefa avela hanjaka sy ny fanajàna ny zo fototry ny mponina.
Miray feo amin’ny mpiaro ny zon’olombelona koa izahay ka manao antso avo mitolaka amin’ny manam-pahefana amin’ny ambaratonga rehetra mikasika ny fanafoanana ny fahafahana demokratika sy ny fitomboan’ny loza mananontanona ny olompirenena malagasy raha vao miaro ny mponina any ifotony iharan’ny fiantraikan’ny asa fitrandrahana harena an-kibon’ny tany any amin’ny faritra maro eto Madagasikara.
Mangataka ny hamoahana tsy misy hatak’andro an’Andriamatoa RALEVA izahay
-	mba ahafahany manomana ny fiarovan-tenany an-kahalalahana mandra-piandry ny fitsaràna satria tsy nanao afa-tsy nampihatra ny zon’ny olom-pirenena hahazo ny vaovao sy fahalalàna momba ireo tetikasa miantraika amin’ny fiainan’ny mpiara-monina aminy izy ;
-	sy mba ahafahany manohy ny asa mendri-pideràna ataony amin’ny fiarovana ny zon’olombelona sy ny fitakiana ny fanajàn’ny rehetra ny lalàna manan-kery.